७६(५) मा पनि दलीय ह्वीप लाग्छ, संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छैन : महान्यायाधिवक्ता बडाल « AayoMail
७६(५) मा पनि दलीय ह्वीप लाग्छ, संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छैन : महान्यायाधिवक्ता बडाल
2021,28 June, 1:54 pm
काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै बडालले सबै उपधारा ४ मै गएर मिसिएकाले दलीय ह्वीप लाग्ने बताएका हुन्।
‘रिट निवेदक पक्षका वकिलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ मा मात्र ह्वीप लाग्ने तर, ५ मा नलाग्ने भन्नु भयो। यसो हो भने विश्वासको मत कसरी लिने? विश्वासको मत लिन त फेरि उपधारा ४ मै जानुपर्छ। अनि यी धारा कसरी छुट्याउने त?’, उनले भने।
बडालले नदीको उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा नदी उपधारा १, २ बाट आएर उपधारा ४ मा मिसिएको छ। अर्को उपधारा ३ पनि उपधारा ४ मै मिसिएको छ। अनि उपधारा ५ पनि त्यहीँ जोडिएको छ। अब छुट्याउने कसरी? संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ ले पनि फेरि उपधारा ४ मै पठाउँछ। उपधारा ४ समुन्द्र हो भने यसमा मिसिएका अरु उपधाराका भंगलो, कसरी छुट्याउने? त्यसैले उपधारा २/३ मा ह्वीप लागछ भने ५ मा पनि लाग्छ। ह्वीपको विषयमा संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छैन।’
त्यसपछि बडाललाई बीचमै रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे – एउटै दलको दुईवटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ?
जवाफमा बडालले एउटै दल एकै पटकमा कोही सत्तामा र कोही विपक्षमा हुन नसक्ने बताए। कहीँ कतै देखिएको यो गाईजात्रा त कर्णालीबाट सुरु भएको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसैले दल भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो। दलीय अनुशासनको विषयलाई अदालतले राम्ररी व्याख्या गरेन वा गर्ने अवस्थामा छ। त्यो हुनु जरूरी छ।
बडालका लागि ३ घण्टा बहस गर्ने गरी समय छुट्याइएको छ।